Madaxweyne Farmaajo oo Mushaarkiisa ka bixiyey mashruuc looga Faa’ideeyey Dad danyar ah. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Madaxweyne Farmaajo oo Mushaarkiisa ka bixiyey mashruuc looga Faa’ideeyey Dad danyar ah.
Madaxweyne Farmaajo oo Mushaarkiisa ka bixiyey mashruuc looga Faa’ideeyey Dad danyar ah.
Ilaa 100 qof oo danyar ah oo ku nool Magaalada Muqdisho ayaa ka faa’idaystay mashruucani indho fiiqista ah oo uu maalgeliyay Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/llaahi Farmaajo kana bixiyay mushaarkiisa.
Wasiiru Dowlaha Madaxtooyada Soomaaliay C/qaadir Macallin Nuur oo dadkaasi ku booqday Isbitalka Yerdimeli oo ay gacanta ku hayaan walaalaha Turkiga oo kuyaala degmada Xamar Jajab ayaa faah faahin ka bixiyay howlaha indho fiiqista ah oo uu madaxweynaha maalgaliyay.
Previous articleWasaaradda Beeraha oo ka digtay fatahaado uu sameeyo webiga Shabeele.
Next articleMadaxweyne Farmaajo oo kulan talo-wadaag ah la yeeshay qaar ka mid ah Ururrada Bulshada Rayidka ah.+(SAWIRRO)